यी हुन : रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने घरेलु आयुर्वेदिक उपायहरु….
Homeसमाचारयी हुन : रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने घरेलु आयुर्वेदिक उपायहरु….
September 11, 2020 admin समाचार 14828
मानिसहरु स्वस्थ तथा तन्दु’रुस्त हुनको लागि उसमा रोग प्रधिरोधी क्षमता बलियो हुनु आ’वश्यक छ । यसका लागि सवै’भन्दा पहिलो कुरा हामीले खान’पानमा ध्यान दिनुपर्छ ।
खानपानसँगै स्टा’मिना बलियो बनाउन विभिन्न उपायहरु समेत अपनाउन सकिन्छ । व्यस्त जीव’नशैलीका कार’ण हाम्रो शरीरले सबै पोषक तत्त्व पाउँदैन जसकारण शरीर अनेकथरी रोगको समस्या’मा पर्छ ।
रोग प्रति’रोधी क्षमता बढाउ’न आयुर्वेदमा उल्लि’खित केही सरल उपायहरू यहाँ बताइएको छ ।
अश्वगन्धा – यो प्राचीन औष’धिले पूरै शरीरमा प्रभाव पार्छ । तनाव, कब्जि’यत र बाथरो’गबाट पनि यसले मुक्ति दिन्छ । तनावका कारण तपाईं शरीरलाई स्वस्थ आहार दिनुहुन्न जसका’रण स्टामिना कम हुन्छ । अश्वगन्धा खाँदा तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ र स्टामिना प’नि बढाउन सक्नुहुन्छ ।
शतावरी – यसको रो’गनाशक श’क्तिले ग्यास र स्नायु प्रणालीमा सकारात्मक असर पार्छ । यो प्रयोग गर्दा स्टा’मिना बढ्छ र तपाईंभित्र आत्म’विश्वास बढ्छ ।
ब्राह्मी – ब्राह्मीमा भएका एन्टीअक्सि’डेन्टहरूले स्टामिना बढाउन सहायता गर्छन् र तौल बढ्न रोक्छन् । यिनी’हरूले शरीरका विषाक्त कुरा शरीरबाट नि’कालेर रक्तकोशिकाहरूलाई वि’कसित गर्छन् ।
शिलाजीत – प्राचीन’कालदेखि नै शिला’जीतको प्रयोग स्टामिना बढाउन’का लागि गरिँदै आएको छ । यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउँछ । यसबा’हेक गोकशुरा, घिउकु’मारी, नीम जस्ता आयुर्वेदिक औष’धिले पनि स्टामिना बढाउन मद्दत गर्छन् ।
ओट्स – ओट्समा भारी मात्रामा ऊर्जा हुन्छ । दिनदिनै दूधका साथ ओट खाने गर्नुभयो भने शरीरको तागत र क्षमता बढ्छ ।
स्प्राउट्स – स्प्रा’उट्स अर्थात् टुसा पला’एका दाना’हरू खानुभयो भने पनि स्टामिना बढाउन सक्नुहुन्छ । टुसा पला’एको मुँगको दाल सबभन्दा बढी लाभदायक हुन्छ ।
गाईको घिउ – तागत ब’ढाउन र शरी रलाई बलियो बनाउन गाईको घिउ सेवन गर्दा लाभ’दायक हुन्छ ।
पालुंगोको झोल – पालुं’गोको झो लले शरीरलाई आव’श्यक सबै पोषक तत्त्व प्रदान गर्छ र ऊर्जा दिन्छ । यस’मा भएको क्याल्सि’यमले स्टामिना बढाउन सहायता गर्छ ।
केरा – शरीरलाई ऊर्जा दिने सब’भन्दा राम्रो स्रोत केरा पनि हो । – खबर हब
घट्यो सुनको मूल्य, आज तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
ह्वात्तै बढे संक्रमित, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्
यस्तो जाडोमा प्लास्टिक ओढेर रुदै भोकै फोहोर टिप्ने आमा ,छोराछोरीले हेरेनन् (हेर्नुहोस् भिडियो)
January 9, 2022 admin समाचार 1685
कालि’माटीको पुल नजिकै एकजना ७८ बर्षिय बृद्ध आमा बस्दै आएकि छिन् । पछिल्लो समय बुढि आमाले थाप्लो’मा भारि बोकेको र सगै कुकुरले भने दातमा भारि च्यापेर आमासगै हिडेको त्यो एकदमै भावुक दृश्य देख्दा र उक्त
March 2, 2021 admin समाचार 5735
June 1, 2021 admin समाचार 5130
विवेकशील साझा दलका नेता उज्वल थापाको नि’धन भएको छ । उनको उपचा’रका क्रममा मंगलबार अपराहृन ४ बजेर २५ मिनेटमा नि:धन भएको हो । सं’क्रमित रहेका थापाको मेडिसिटी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार जारी राखि’एको थियो ।